Fianarana faharoa | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Second courses
Karazana koban-kisoa vita amin'ny kalsioma miaraka amin'ny tongolo lay sy ny ginger
Mila faharetana ny fikolokoloana henan-kisoa matsiro. Arakaraka ny hahamasaka ny hena no ho matsiro kokoa. Ho fanampin'izany, ny henan-kisoa amin'ny taolana dia mamy sy matsiro. Ny taolan-kisoa dia tsara amin'ny ...
Sakafo Okrainiana: vy benderiki - recipe
Benderiki dia voaomana matetika any amin'ny faritra andrefan'i Ukraine. Raha ny marina dia crepe feno hena ireo. Fa tsy nentin-drazana - horonana, fa aforitra amin'ny telozoro. Ka ny famenoana ny benderiks dia mamy sy ...
Biby kesika novokarina tamin'ny voankazo, ny atiny ary ny sausages - recipe tsara!
Ny latabatra amin'ny Taom-baovao dia ho toy ny angano tena raha mametraka turkey toy izany ianao. Lehibe, be ranony, mahavelona ary tena matsiro tokoa! Ho an'ny servisy 7-8 dia mila: turkey lehibe 1 ...
Kisoa miaraka amin'ny baolina mena
Tianao ve ny akoho matsiro miaraka amin'ny fromazy? Iza no hameno ny tsiron'ny lovia, hampiavaka azy bebe kokoa? Dia hifanaraka aminao ny fomba fanamboaranay ny akoho amam-borona fromazy! Fahano akoho nendasina miaraka amin'ny lovia mahazatra ny ankohonany ...
Fitaovana portiogey: Recipe for Rice miaraka amin'ny tsaramaso mena sy ny voankazo mahazatra
Ny fandrahoan-tsakafo Portiogey dia tsy azo alaina sary an-tsaina raha tsy misy resipe-tsaramaso. Misy fomba fahandro arivo sy iray ho an'ny lasopy tsaramaso, salady, lovia sarotra. Ny karazana tsaramaso isan-karazany dia atambatra amin'ny trondro sy hena. Izy io dia ampiasaina hanomanana ny fiparitahan'ny sandwich, ovy nopotsehina ary nofenoina tsindrin-tsakafo mamy mihitsy aza. Zahao ny fomba fahandro feno, sakafo Portiogey - tsaramaso fotsy sy saosisy. Ny lovia dia azo jerena ho lovia mitokana na sarotra. Ho azy dia misafidy saosisy hena somary mifoka miaraka amin'ny tongolo, paprika ary dipoetra izy ireo. Any Portugal, ity karazana saosisy ity dia antsoina hoe linguiça. Fa kosa, azonao atao ny mampiasa hena hafa na mifoka sigara mihitsy aza. Akora ilaina amin'ny Resipeo tsaramaso Portiogey: Siny misy tsaramaso fotsy nandrahoina; Saosisy 200 g; Karaoty 1, tongolo gasy sy tongolo tsirairay; karaoty persily vaovao; 200 g ny vary. Voanjo fandrahoan-tsakafo Raha mampiasa tsaramaso maina ho an'ny fomba fahandro ianao dia maharitra iray andro ny fanomanana. Tsy maintsy handemana azy mandritra ny 12 ora farafahakeliny ianao, avy eo mahandro mandritra ny fotoana maharitra. Fa afaka mampiasa sakafo am-bifotsy ianao - ny siny feno tsaramaso nandrahoina dia hamonjy fotoana betsaka. Ny tena zava-dehibe dia ny tsaramaso ao anaty siny ao anaty tsaramaso, ary tsy masaka loatra amin'ny porridge. Ny lovia dia masaka hatrany am-piandohana ka hatrany amin'ny lovia iray. Endasina ny tongolo sy ny karaoty miaraka amin'ny saosisy (amin'ny sakafo Mediteraneana, menaka oliva no ampiasaina hanendasana). Manampia vary. Afaka mandatsaka rano mangotraka na ron-kena ianao. Afangaro ny tsiro ary ampio tsaramaso. Vonona hamantatra hoe efa vonona ny vary Afafio amin'ny persily voatetika alohan'ny hanolorana azy. Same ...
Ahoana ny fomba ompiana ovy ao anaty lavaka mangatsiatsiaka?
Ahoana ny fanendasanao tsara ny ovy ao anaty vilany tsy miadana? Raha endasina amin'ny ovy amina multicooker dia mila mampiasa ny programa Baking na Frying ianao. Ny fotoana fandrahoana ovy dia miankina amin'ny herin'ny maodely sy ny haben'ny ovy voatetika. ...
Ahoana ny fiangonana ny kibo amin'ny henan'omby eo ambanin'ny tain-drazana na ny fitehirizany dia antsoina hoe matavy misy fatin-kena
Ny fomba fanamasinana ny kibon'ny henan-kisoa henan-kisoa na ny sisiny dia antsoina hoe lard miaraka amina hena no anoroako azy handraho ny kibon'ny kisoa. Araraka ny sira 4 sotrokely ao anaty atiny. sotro ho an'ny 1kg sy mena ...
Ahoana no hikarakarana legioma aldente?
Ahoana ny fahandro legioma aldente? Aza mahandro raha tsy masaka tanteraka, ary avy eo apetraka ao anaty rano mangatsiaka, tsy haiko ny momba ny ranomandry. Mahandro toy izao aho - manapaka zucchini na zucchini lehibe ...
Ahoana no handraisanao ranom-bary na ravin'akoho? Misy fomba fanamboarana azo atao ve?
Ahoana no fomba fahandro vary na bubur millet amin'ny ronono? Misy ve ny fomba fahandro mahazatra izay nosedraina tamin'ny fampiharana azy? Rehefa mandrefy solomaso aho ary tsy mandeha tsara amin'ny sotro, dia mijery sy manandrana ary ny zavatra rehetra ...
Afaka manala ovy ve aho miaraka amin'ny holatra na voasilikilika?
azo atao ve ny manendy ovy amin'ny holatra masira na namboarina? azonao atao ny manendy ovy iray, ary mihinana azy amin'ny holatra masira sy namboarina (tsy mila endasina). Ovy endasina miaraka amin'ny holatra atsimo ...
Ahoana no fomba nanosehana ny vary orza ho siramamy?
Ahoana ny fahandro ny orza mba ho potipotika? Arotsaho ao anaty vilany ny voamadinika ary atsofohy ao anaty rano malefaka, afangaro mandra-pahatongan'ny fako rehetra (ity no lafarinina noforonina nandritra ny fitaterana serealy ...
Inona no fotoana handraisana ny kibon'ny akoho?
Maharitra hafiriana ny fahandroana vavon'akoho? Mbola, fomba fahandro tena tsara) Hetezo ho peratra ny tongolo, endasina, ampio ny karaoty voakiky, endasina kely kokoa. Avy eo, mandefasa dipoavatra Bulgarian notapahina ho rongony, ary averina ...
manao ahoana ianao manao siramamy ho an'ny pety?
ahoana no anaovanao ny gravy peppers? Ny karotoko dia ampahany amin'ny famenoana (tongolo, karaoty voahidy, vary masaka kely, hena voatoto nendasina - mba hanovana loko fotsiny dia lasa ...
Ny fomba hanamboarana ny tandroka mofo hena
ny fomba fahandro ny tandroka hena nandrahoina Andrahoy ny tandroka, endaso ny hena voatoto miaraka amin'ny tongolo sy paty voatabia, azonao afangaro amin'ny tandroka ilay hena vokarina, na azonao apetraka eo akaikin'ny ...
Inona ny mozika mahasoa ??
ahoana no mahasoa ny akamaso? Toy ny hazan-dranomasina rehetra, be proteina sy microelement izy ireo. ny Mussel rehetra dia mollusc bivalve. Ny henan-javamaniry dia mihoatra ny zava-drehetra amin'ny resaka glycogen, ilaina amin'ny vatan'olombelona ...
Ahoana no hialana pilaf? mba hanamboarana ranom-boankazo.
ahoana no mahandro pilaf tsara? ka potipotika ny vary. kely ny rano ilaina, ary mandritra ny fandrahoana sakafo dia aza sokafana ny sarony ary aza manelingelina ny pilaf. Manana vary mandritra ny antsasak'adiny amin'ny masoandro aho ...
Ahoana ny fomba ahandroana vary? noho izany izy dia mibaribary loko mavomavo? naheno miaraka amin'ny karmera na inona no ilaina ampiana?
Ahoana no mahandro vary? ka mahazo loko mavo izy? henoina amin'ny tamotamo sa inona no tokony ampiako? Ny safrona ihany no afaka manome loko sy hanitra. Ny turmerika dia hanome loko, fa tsy ny tsirony. ...
Inona ny henanina voahodina?!
Inona ny hena marbled?! Ity misy marbra tsara http://www.kamentorg.ru/ Manoro hevitra anao aho mba hijery sy hisafidy zavatra ho anao any ... hen'omby misy tavy matavy. Ity dia hena misy tavy matavy mamorona ...
Ahoana no hanamboarana fo, aty ary havokavoka? henan-kisoa
ahoana no mahandro ny fo, aty ary havokavoka matsiro? henan-kisoa efa nanandrana nihinana BOVE EGGS ve ianao? Mahafinaritra hoy izy ireo)) Raha ny marina, tsy haiko ny mahandro zavatra toy izany.)) Aleo marina, tenderloin ...
49 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,645.